पारिश्रमिक र व्यावसायिक आम्दानीमा कति कर बुझाउनुपर्छ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home अर्थ पारिश्रमिक र व्यावसायिक आम्दानीमा कति कर बुझाउनुपर्छ?
एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक आयकरको सीमा साढे २ लाखबाट बढाएर साढे ३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थात्, तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ भने वर्षको साढे ३ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर तिर्नुपर्दैन। दम्पत्तिका हकमा यो सीमा ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। आयकर छुट सीमासम्मको पारिश्रमिकमा पनि सबैले एक प्रतिशत सार्वजनिक सुरक्षा कर भने तिर्नुपर्नेछ।
हरेक वर्ष बजेट घोषणापछि सर्वसाधारणको चासो राजस्व दरमा हुन्छ। त्यसमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत पारिश्रमिक, व्यावसायिक आम्दानी वा कम्पनीले कमाएको नाफामा लाग्ने करमा के–कति हेरफेर भयो भन्नेमै धेरैको सरोकार जोडिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबाट तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत पारिश्रमिक वा आम्दानीमा के–कति आयकर तिर्नुपर्ने भयो त?
बजेटले एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक आयकरको सीमा साढे २ लाखबाट बढाएर साढे ३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। अर्थात्, तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ भने वर्षको साढे ३ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर तिर्नुपर्दैन। दम्पत्तिका हकमा यो सीमा ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ।
आयकर छुट सीमासम्मको पारिश्रमिकमा पनि सबैले एक प्रतिशत सार्वजनिक सुरक्षा कर भने तिर्नुपर्नेछ।
छुट सीमाभन्दा बढी कमाउनेले कति रकमको कति कर तिर्नुपर्छ त?
छुट सीमाभन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म बढी आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत कर लाग्छ। वार्षिक २५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ भने २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने वा पारिश्रमिक हुनेले ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
यसअनुसार कुनै एकल व्यक्तिले ३० लाख पारिश्रमिक आम्दानी गर्छ भने उसले चार तहको वर्गीकरणअनुसार कर तिर्नुपर्छ। जस्तो, ३ लाख ५० हजारको उसलाई आयकर लाग्दैन। यति रकममा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ। त्यसपछिको एक लाखमा १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। त्यसपछि २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र बाँकीमा ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
व्यक्तिगत व्यवसायबाट हुने आम्दानीमा अरू सबै समान हुन्छ, तर आयकर छुट सीमासम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्दैन।
सरकारले पूर्व अनुमानित आम्दानीका अनुसार पनि साना करदातालाई कर तिर्ने अवसर दिएको छ। यसअनुरुप फर्म दर्ता गरेपछि सरकारले तोकेको क्षेत्र र तोकेको कर अग्रिम बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले गाविस, नगरपालिका तथा उपमहानगर वा महानगरमा दर्ता हुनुपर्छ। गाविसमा प्रतिवर्ष पूर्व अनुमानित १५ सय रुपैयाँ कर, नगरमा दर्ता छ भने २५ सय र उप तथा महानगरमा दर्ता भए २५ सय रुपैयाँ कर तिर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सहकारीले आम्दानीको २० प्रतिशत र प्रालि तथा संस्थाहरूले आम्दानीको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। सरकारले निश्चित तोकेका क्षेत्रमा बचत तथा सहकारी संस्थाको कर दस्तुरमा भने केही रकम छुट दिने गरेको छ।